Sina ZDS andian-dahatsoratra elliptical mitovy hatevin'ny lamba fanamboarana sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny efijery mitovy matevina dia ampiasaina amin'ny fanasokajiana ny sinter, ny pellet sinter ary ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany amin'ny indostrian'ny metalurgique, ary ny fanasokajiana sy ny fizahana sivana amin'ny indostrian'ny arintany. Raha ampitahaina amin'ny karazana masinina sieving hafa mitovy amin'ny famaritana azy, lehibe kokoa ny fahaizan'ny fanodinana ary avo kokoa ny fahombiazan'ny fitiliana. Izy io no safidy voalohany amin'ny efijery mihetsiketsika lehibe amin'ny zavamaniry sintera lehibe, zavamaniry pelletizing, concentrator, zavamaniry fanomanana arina, ary soloina mety amin'ny efijery goavambe goavambe.
Fitsipika miasa: ny efijery an-tampon'ny efijery andiany ZDS dia misy fizarana telo misy zoro fironana samy hafa, izay mahatonga ny hatevin'ny faritra tsirairay amin'ny sosona ara-nofo eo amin'ny efijery dia mitovy mitovy; ny fampiharana ny fitsipiky ny fiara telo-axis ary ny fanentanana an-keriny, dia milamina ny fanjakana mihetsika. Ny elanelana amin'ny boatin'ny efijery dia ellipse, ary ny efijery mitovy elliptical mitovy habe dia manampy amin'ny fitaterana mialoha, ny fanamafisana ary ny sieving ny fitaovana eo amin'ny sehatry ny efijery, noho izany dia manana fahaiza-manao fanodinana lehibe kokoa sy fahombiazan'ny fisavana ambony noho ny efijery mahazatra sy ny fivezivezena boribory lamba. Na izany aza, rehefa mitovy ny fahaizan'ny fitsaboana sy ny fahombiazan'ny fitiliana, ny efijery mitovy matevina amin'ny elliptika dia manana faritra fitiliana kely kokoa, izay afaka mitsitsy vola.
Fitaovana ara-drafitra: ny efijery mitovy matevina amin'ny elliptika dia misy boaty efijery, vibration exciter, rafitra fanokanan-tsofina ary fitaovana fampitana. Araka ny toetoetran'ny fitaovana voasarika, ny akora sieve plate dia mety ho polyurethane na firaka mahazaka akanjo. Ny sakana eccentric an'ny exciter vibration dia entina mihodina amin'ny alàlan'ny motera amin'ny alàlan'ny fitaovana fampitana synchronous. Ny ellipticity sy ny zoro fitarihana ny dian'ny fihetsiky ny boaty efijery dia azo ovaina.
Model Fahafahana fitsaboana / ora Fahombiazan'ny fitiliana% Vovoka KW weightkg
Previous: Ya (k) andian-tsarimihetsika boribory goavambe
Manaraka: ZK series series get vibrating